वाम गठबन्धनलाई उपेन्द्र यादव किन चाहियो ? - samayapost.com
वाम गठबन्धनलाई उपेन्द्र यादव किन चाहियो ?
समयपोष्ट २०७४ फागुन १६ गते १:२१
एमाले-माओवादी वाम गठबन्धनलाई केन्द्रमा सरकार सञ्चालनका लागि प्रतिनिधिसभाका कुल १३७ सांसद आवश्यक पर्छ। वाम गठबन्धनसँग संसद्को २७५ सदस्यमध्ये १७४ अर्थात् ६३ दशमलव २७ प्रतिशत मत छ।गठबन्धनसँग दुईतिहाइ नजिक मत रहँदा पनि यी दुई दलले १६ सिट रहेको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन्।
सरकारमा सहभागिताका लागि फोरम-एमालेबीच बुधबार निर्णायक वार्ता हुने सम्भावना छ। वार्तामा दुई पक्षबीच सहमति जुटे फोरम सरकारमा सहभागी हुने संघीय फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द श्रेष्ठले बताए। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।